“चुनाव छिटै हुनुपर्छ ; ढिलो-चाँडो नेपाल हिन्दू’राष्ट्र नै बन्छ ।” : कमल थापा (भिडियो सहित) – Sadhaiko Khabar
“चुनाव छिटै हुनुपर्छ ; ढिलो-चाँडो नेपाल हिन्दू’राष्ट्र नै बन्छ ।” : कमल थापा (भिडियो सहित)
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आषाढ २२, २०७८ समय: १६:४०:०३
काठमाडौँ / राप्रपाका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले आफ्नो पार्टी चुनावको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका छन् । अहिले देशमा विभिन्न किसिमका वि’कृति तथा विसं’गति देखिएको भन्दै यसको समाधानको लागि पनि ताजा जनादेशमा जानुपर्ने आफूहरुको धारणा रहेको थापाको भनाई छ ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट सोमबार प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै अध्यक्ष थापाले यस्तो बताएका हुन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मु”द्दा अदा’लतमा विचाराधिन रहेकोले छिट्टै फैसला आउने पनि सुनाए । प्रस्तुत छ थापासँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा छ कि चुनावको पक्षमा छ ?
अब सैद्धान्तिक रूपमा हामीहरु चुनावको पक्षमा छौँ । देशमा अहले जे/जस्तो वि’कृति तथा विसं’गति देखिएका छन्, यसको समाधान ताजा जनादेश हो भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता छ । जहाँसम्म संसद् विघटनको संवैधानिक प्रश्न छ । यो सर्वोच्च अदा’लतमा विचाराधिन छ । केही दिनभित्रै सर्वोच्च अदा’लतले फैस’ला गर्नेछ । सर्वोच्च अदा’लतले जुन फैसला दिन्छ, त्यो हाम्रो लागि स्वीकार्य छ ।
त्यसोभए तपाँईको पार्टी ताजा जनादेशको लागि जनताको बीचमा जानुपर्छ भन्नेमा छ ?
सिद्धान्त त अहिले देशमा देखापरेको वि’कृति र विसं’गतिको एउटै मात्र विकल्प त्यही नै हो ।
पार्टीभित्र पनि त तपाईँहरुका मत त विभाजित छन् नि ?
अब त्यर्तो धेरै ठुलो मतभेत छैन । प्रजातान्तिक पार्टीमा बहस हुनु स्वभाविक हो । हामी मूलभत विषयमा एक ठाउँमा नै छौँ ।
कमल थापा निर्वाचनको पक्षमा अनि डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी संसद् पुन स्थापनाको पक्षमा किन यस्तो भयो तपाईको पार्टीभित्र ?
त्यस्तो होईन । तीन जना अध्यक्षले सामूहिक रुपमा जुन वक्तव्य दिएका छौँ । त्यो वक्तव्यमा आफ्नो धारणा प्रष्ट रुपमा राखेका छौँ । अहिलेको विकृ’ति र विसं’गतिको समाधानको उपयुक्त विकल्प चुनाव हो । संवैधानिक विषय सर्वोच्च अदा’लतले व्याख्या गर्छ । त्यसमा हामी स्वीकार गछौँ भन्ने हाम्रो पार्टीको आधिकारिक धारणा हो ।
होईन, अहिले देशमा म’हामारी छ, देश संक’टमा छ । जनता समस्यामा छन अनि निर्वाचन आजको आवश्यकत्ता हो र ?
निर्वाचन हुने त कार्तिक/मंसिरमा हो । त्यतिबेलासम्म बर्खाको समय त त्यहाँसम्म सकिहाल्छ । सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको को’भिड महा’मारी छ । यो को’रोना महा’मारीको निम्ति सरकारले उपयुक्त वातावरण तयार गर्नुपर्छ । खोप पनि ल्याएर आम जनातालाई लगाउनुपर्छ । र को’भिडलाई निय’न्त्रण गरेको अवस्थामा मात्रै चुनाव हुनसक्ने हो ।
हाम्रो देशमा पाँच वर्ष सरकार चलाउन कसैले पाएका छैनन, यो सरकारले पाँच वर्ष चलाओस भन्ने जनताको चाहना छ, तपाँईँ पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीको पक्षमा किन लाग्नुभयो बताउनुहोस ?
केपी शर्मा ओलीको पक्षमा भन्दापनि हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिमा अन्य पार्टीहरुभन्दा फरक विचार धारा बोकेको पार्टी हो । हाम्रो पार्टीको स्पस्ट धारणा छ । खास गरेर यो २०६२–०६३ को आन्दोलन छि जुन मार्गचित्र र जुन अवधारणाको आधारमा अगाडि बढाउन खोजियो, यो त्रुटिपूर्ण छ, यसमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता छ । र, अहिले जुन किसिमको देशमा संकट देखापरिराखेको छ, संवैधानिक सं’कट छ । देशमा ब्रम्ह’लुट छ, विदेशीको चलखेल तिब्र रुपमा बढिरहेको छ । बेरोज’गारीको समस्या छ ।
यी सबै समस्या सिर्जना हुनुमा निश्चय पनि केही हदसम्म सत्तारुढ दल, राजनैतिक दलहरुको अकर्मण्यता त छँदैछ । त्यसको साथसाथै यो बाटो नै गलत छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता हो । त्यसकारण यो बाटो सुधार्ने क्रममा ताजा जनादेश नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण राखेर हामीले यो ताजा जनादेशको कुरा राखेका हौँ ।
तपाईँको पार्टी सरकारमा जाने भन्ने कुरा पनि एकपटक चर्चामा थियो, प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदममा तपाईँको पूर्ण सर्मथन हो त ?
केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारमा मात्रै होईन, यसभन्दा अगाडिका सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको सर्मथन गर्ने, ग’लत कामको विरोध गर्ने हाम्रो नीति रहँदै आएको छ । यो नीतिलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ । केपी ओलीजीले खासगरेर राष्ट्रियताको सवालमा पछिल्लो कालखण्डमा मू रूपमा नेपालको पश्चिम सिमानामा रहेको लिम्पियाधुरा, कुटीलगायतलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा बनाउनुभयो । नेपालको आफ्ना दावि स’शक्त ढंगबाट प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसलाई मैले अत्यन्तै सकारात्मक रुपमा लिएको छु हेर्नुहोस् । त्यो एउटा ऐतिहासिक काम नै हो ।
त्यसैगरि हाम्रो तराई÷मधेश क्षेत्रमा देशलाई टुक्रा बनाउनुपर्छ भनेर लागेका सिके राउतलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनको लागि उहाँ जसरी सफल हुनुभयो । त्यसलाई मैले सकरात्मक रुपमा लिएको छु । त्यसमा अन्य कतिपय विषयहरु छन । भ्रष्टाचारका विषयहरु छन । कोभिड महा’मारीको विषय छन । विकास निर्माणसंग सम्बन्धित अन्य विषयहरु छन । त्यसमा हामी आलोचनात्मक रुपमा प्रस्तुत भैराखेकै छौँ ।
पछिल्लो समय नेपालमा धर्मनिर’पेक्षताको वि’रोध भैरहेको छ, यहाँको धारणा के हो ?
जहाँसम्म हर्नुहोस् संघीयता, धर्म’निरपेक्षता र गणतनत्रको विषय छ । यो विषयमा वैचारिक रुपमा यसको विरुद्धमा छौँ । यो कुरा मैले लुकाईराख्नुपर्ने जरुरी छैन । खास गरेर यी विषयहरुमा अहिले विभिन्न राजनैतिक दलहरुमा बहसको विषय बन्न गएको छ । यसलाई मैले सकरात्मक रुपमा लिएको छ । चाहे त्यो एमालेभित्र होस् चाहे त्यो काग्रेसभित्र होस् ।
अहिले जुन संघियता, ध’र्म निरपेक्षताको विकल्पमा पनि हामी सोच्नुपर्दछ भन्ने बहस चलिरएको छ । त्यो अत्यन्तै प्रसंशनीय छ । किनकी त्यो १४ बर्ष अगाडिदेखि नै भन्दै आएको कुरा हो । अब बीचमा कसैले त्यसलाई सुनेन, त्यसलाई यो कुरा तपाईँलाई पनि थाहा छ कि हामीले यो संघीयता र धर्म’निरपेक्षताको वि’रोध गरेर जनताको माँझमा जाँदाखेरि हामीमाथि आ’क्रमण भयो ।
ज्या’न नै हत्के’लामा रहेको अवस्था थियो । तर, अहिले विस्तारै त्यो मान्यताप्रति जनताको आकर्षण पनि बढ्दै आएको छ । यो १२–१४ वर्षको अभ्यासले पनि हाम्रा मान्यताहरुलाई पुष्टि गरेको छ । र, त्यही कुरा अहिले राजनैतिक दलहरुमा बहसको विषय बन्नु प्रशंसनीय छ । म त प्रष्ट रुपमा भन्छु–हेर्नुहोस के भने हामीले ढिलो गर्नु हुदैँन, यो संघीयता, गणतन्त्र र धर्म’निरपेक्षताको विषयलाई पुनर्विचार गर्नुपर्दछ ।
महेश बस्नेतले त आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संघीयता र धर्म’निरपेक्षताबारे विचार गरियोस भनेर प्रस्ताव नै राख्नुभएको छ र पार्टीले स्वागत पनि गरेको छ ?
यो अहिले बहसको विषय छ । जबसम्म नेकपा एमालेले औपचारिक रुपमा यसको विषयमा निर्णय गर्दैन्, तबसम्म मैले भन्न त मिल्दैन् । जसरी अहिले नेकपा एमालेमा पनि यो विचारको प्रवेश भएको छ, नेपाली काँग्रेसमा पनि एउटा ठुलो जमातले हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा वकालत गरिएको छ । त्यसलाई पनि मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु ।
बास्तवमा यो एउटा राष्ट्रिय आवश्यकता नै हो । यो संघीयता, धर्म’निरपेक्षता र गणतन्त्रको जुन एजेण्डा उठान भएको छ, हुन त यसको राष्ट्रिय संवाहकको रुपमा देखिएको छ, तर मूल रुपमा यो बाहृय श’क्तिकै एजेण्डा हो । यसको विश्लेषण गर्दै यसको जरासम्म पुग्ने हो भने यो नेपाली जनताको चाहना र आवश्यकताको विषय नै थिएन ।
यो विभिन्न कारणले गर्दा बाहृय श’क्तिले यो एजेण्डा नेपालमा स्थापित गर्न खोजे । नेपालमा यसलाई स्थापित गर्नको निम्ति उनीहरुलाई संवाहकको आवश्यकता थियो, तिनीहरुले केही राजनैतिक दलहरुलाई र नेताहरुलाई प्रोत्साहीत गरे । यो रो’ग, भो’क निराकरण र प’छौटेपनको आधार हो भन्ने कुरा गरेपछि केही जनता केही समय अल्मल्लिएका हुन् । अब त्यो कुरा बुझिसके जनताले र त्यो कुरा प्रष्ट हुँदै गएको छ ।
त्यसोभए अब हाम्रो देश नेपाल हिन्दु’राष्ट्र बन्छ ?
ढिलो/चाँडो हिन्दु’राष्ट्र बन्छ, बनाउनुपर्छ । हामीले यो हिन्दू’राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर राज्यले हिन्दु’राष्ट्रलाई मात्रै बढावा दिनुपर्छ भनेको होईन । सनातन हि’न्दु मान्यता यस्तो मान्यता हो, जो बहुलवादमा विश्वास गर्दछ । अरु ध’र्म र संस्कृतिको अस्तित्व स्विकार गर्दछ ।
यो आँफैमा अर्थात् बहुलवादी मान्यता भएको हुनाले नेपाल हि’न्दुराष्ट्र हुँदाखेरि अन्य ध’र्ममाथि थि’चोमिचो हुने पनि होईन । अन्य ध’र्म र सम्प्र’दायमा रहेकाहरुले आफ्नो पुजा, आराधना आफ्ना आस्था कायम राख्ने कुरामा कहीँपनि अ’बरोध हुने होईन र पहिले पनि भएको थिएन । – रि’पोर्टर्स नेपाल’बाट । हे’र्नुहोस् भिडियो :-